Moya China Uphuculo olomeleleyo Electronic Mouse Repeller unomatse ogxotha Anti Rat Mosquito Killer Pest Mosquito Yala Ukulawula Trap umzi-mveliso kunye nabavelisi |Jinjiang
Imodeli yemveliso: 107
Umsebenzi oyintloko: Le mveliso isebenzisa amagagasi e-ultrasonic ukuvuselela i-neurons yezinambuzane, kwaye umgaqo wokubangela ukuba izinambuzane zingakhululeki ufezekisa umphumo wokugxotha omiyane, iigundane, ama-cockroach, i-bed bugs, i-fleas kunye nezinye izinambuzane.Yamkela itekhnoloji ye-ultrasonic ephezulu kunye nesezantsi rhoqo, enokutshintshwa ngokukhululekileyo.Ibhendi yefrikhwensi ephantsi ijolise ikakhulu kwiimpuku, ukuze kuphunyezwe isiphumo esingcono sokugxotha iimpuku.Ukusetyenziswa kwezithethi ezimbini kwandisa kakhulu uluhlu olusebenzayo.I-ultrasonic conversion frequency ingasetyenziselwa ukujolisa kwiintlobo ezahlukeneyo zezinambuzane.Le mveliso ayinayo ityhefu, ayinancasa, ihambelana nokusingqongileyo, kwaye ayisebenzisi imitha, kwaye inokusetyenziswa ngabasetyhini abakhulelweyo kunye nabantwana.
Igama leBrand: DY, DY
Inombolo yomzekelo: DY-107
Uhlobo Lwezinambuzane: Iimbovane, iinyosi, ooqongqothwane, iBorer, iindlebe, iimpukane, iimpondo, iimpuku, impuku
Umthamo: 1, 100000 - 1000000
Ukusetyenziswa: ulawulo lwezilwanyana, ifama, ulawulo lwezinambuzane, iSacholo sokugxotha iingcongconi, isincamathelisi sokugxotha iingcongconi, ukucoca/uGcino, izityalo & negadi, ikhaya & nomjikelezo, I-SANITARY, Ukususwa kwevumba/ukugutyungelwa kwamanzi, iiMethi zokubhaka, ukupholisa, isiselo/ukutya, i-Thermal
Iinkcukacha: >30 Iziqwenga
Ubungakanani bephepha: 92X73X63MM
Ubonelelo lwaMandla: Ibhetri eyakhelweyo etshajwayo
Ukusetyenziswa: INkqubo yokuNqanda i-Ultrasonic Rodent
Uhlobo oluhlakaniphile: Ulawulo lwelizwi
Ithuba: Itheko, uMtshato & noKuthethathethana, uMtshato, ukuGqiba
Iibhetri ezifunekayo: Hayi
Olwakhe Uphawu: ewe
Isicelo: Iofisi, igumbi lokulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi, ngaphakathi, ngaphandle, indawo yokuhlamba impahla, iBalcony, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela, Ipaseji, indawo yaseDongeni
Ngaba isixhobo esihlakaniphile: ewe
Ixesha lonyaka: A/W
Igama lemveliso: Isacholo sokugxotha iingcongconi
Ukubonelela ngeAmandla: I-1000 Piece / amaqhekeza ngosuku
Ubuninzi (Amaqhekeza) 1 - 4 5 - 10 >10
Est.Ixesha (iintsuku) 8 15 Kuya kuthethathethwana
Immimiselo yokuhlawula: L/C;D/A;D/P;T/T;Western Union,MoneyGram
Ubunakho bokubonelela: 1000.0 Ipeyisi / iipeyisi ngosuku
Igama Inkqubo ekwinqanaba eliphezulu le-Ultrasonic Rodent Repelling
Umbala Ikhabhoni engwevu Intsimbi engwevu
[Inikezelwe kwi-Rodent Repelling]:Ngokungafaniyo nezinye izitshabalalisi kwimarike, i-ultrasonic mouse repellent yenzelwe ukujolisa iigundane, iigundane, ii-squirrels kunye nezinye iigundane.Ulawulo lweegundane luya kufumana umphumo ongcono ngokusebenzisa imveliso yethu.
[I-Twin Mode Operation]:Isixhobo se-Ultrasonic sokugxotha iimpuku sisebenzisa i-chip yamva nje ehlakaniphile kwaye inemowudi emibini yokusebenza .Iindlela ezahlukeneyo zikhupha amaza ahlukeneyo esandi.Amaza omsindo avela kwisixhobo sokugxotha iimpuku aya kuvuselela inkqubo yembali yempuku kunye nengqondo.Iimpuku, iimpuku, oonomatse ezinye iimpuku azikwazi ukumelana nesandi ukuze zishiye ikhaya lakho.
[100% Ikhuselekile kuBantu nezilwanyana ezifuywayo]:Akukho khemikhali, akukho kubulala.Le ultrasonic yokugxotha iimpuku yenziwe nge-ABS ye-flame retardant material, ehlala ixesha elide kwaye ihambelana nokusingqongileyo .Ayenzi bungozi kubantwana bakho nakwizilwanyana zasekhaya.Kwaye ayiyi kubulala ezi izilwanyana, zivumele ukuba ziphume kwikhaya lakho.
[Ukhuseleko Olusebenzayo Olubanzi]:Uluhlu olusebenzayo logxothi lwethu lweempuku luyi-155000 yee-intshi zesikwere.Isetyenziswa kakhulu kumagumbi okulala, ekhitshini, kwiiholo, kwizindlu zokugcina impahla, kwiiofisi, kwiihotele, njalo njalo.Sicebisa ukuba ufakele isigxothi seempuku kwigumbi ngalinye kuba i-ultrasound ayikwazi ukungena kwiindonga kunye nezinto eziqinileyo.
Ngaba iimpuku ezincinci zihlasela ikhaya lakho, indawo yokugcina impahla, ivenkile okanye indawo yeofisi rhoqo? Ngaba oonomatse baluma iingcingo ekhayeni lakho? Akukho ngxaki, sikulungele ukukunika into entsha yokulwa nazo--i-ultrasonic mouse repeller.I-rodent repeller ikhupha amaza e-ultrasonic yee-frequencies ezahlukeneyo, ezinokuthi ziqhube iimpuku kude.Isixhobo sinokubekwa kulo naliphi na igumbi kwaye alisebenzisi izinto eziyityhefu ngexesha lomsebenzi.
Izixhobo zoKhuseleko:Itanki eyakhelwe-ngaphakathi yokumelana nomlilo
Ubuninzi begalelo: 25-65kHz
Igalelo lombane: 90V-250V
Ubushushu bokusebenza: -15 Celsius -60 Celsius
Ubushushu bePerating: -10 Clesius ~ 60 Celsius
Ukufuma okuSebenzayo: ngaphantsi kwe-85%RH elinganayo
Ukufuma okuPerating:ngaphantsi kwe-85%RH elinganayo
1.Nceda ugcine umgama kwikhaphethi, icurtaun kunye nayo nayiphi na imathiriyeli yokufunxa isandi enokunciphisa isiphumo sesigxothi-zinambuzane.
2.I-ultrasonic rodent repellent ineendlela ezimbini zokusebenza:Imode1(ukukhanya okumthubi kudanyaza kancinane),Imode2(izibane ezibomvu nezimthubi ziyaqhwanyaza ngokutshintshanayo).Asiyiva iMode 1 kodwa iMode 2 inokuviwa yindlebe yomntu.Kuyacetyiswa. ukusebenzisa iNdlela yesi-2 xa enye isekhaya.
3.Ungasebenzisi izinyibilikisi ezinamandla, amanzi okanye ilaphu elimanzi ukucoca into yokugxotha iimpuku.
Uhlobo lwePlug: Iplagi yase-US, isebenza eCanada, eIndiya, eJapan, eMexico, eThailand, eTaiwan, eUnited States, ePhilippines njalo njalo.
Kuphela ngumxholo wepakethe ongentla, ezinye iimveliso azibandakanywanga.
Qaphela:Ukudubula okukhanyayo kunye nemiboniso eyahlukeneyo kunokubangela ukuba umbala wento ekumfanekiso ube yinkunkuma eyahlukileyo kwinto yokwenyani.Umlinganiselo ovunyelweyo wempazamo ngu +/-1-3cm
A1:200PCS yoyilo lwethu olukhoyo.
I-Q2: Ndingayifumana isampula ye-odolo yemveliso?
A2:Ewe, siyakwamkela umyalelo wesampuli ukuvavanya kwaye ukhangele umgangatho.Iisampulu ezixutywe zamkelekile.
Q3: Kuthekani ngexesha lokukhokela?
I-A3:Iisampulu idinga iintsuku ezi-3-5, ixesha lokuvelisa ubuninzi lidinga iiveki ezi-1-2 zobuninzi beodolo.
I-Q4: Uzithumela njani iimpahla kwaye kuthatha ixesha elingakanani ukufika?
I-A4: Sidla ngokuthumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx okanye i-TNT. Ngokuqhelekileyo kuthatha iintsuku ze-6-9 ukufika.I-Airline kunye nokuthunyelwa kolwandle nakokuzikhethela.
Q5: Ngaba kulungile ukuprinta uphawu lwam kwimveliso?
A5: Ewe, Nceda usazise ngokusesikweni phambi kwemveliso yethu kwaye uqinisekise uyilo kuqala ngokusekwe kwisampulu yethu.
Q6: Ngaba uyasinikeza isiqinisekiso seemveliso?
I-A7: Okokuqala sazise iimfuno zakho okanye isicelo.Okwesibini, Sicaphula ngokweemfuno zakho okanye iingcebiso zethu.Umthengi weTirdly uqinisekisa iisampuli kunye neendawo zediphozithi zomyalelo osemthethweni.Okwesine, silungiselela imveliso.
Ngaphambili: Umgangatho waseMelika kunye nomgangatho waseYurophu we-Electronic ultrasonic pest pest for mouse roach mosquito repeller
Okulandelayo: Iisweettreats Ukonga Amandla eUltrasonic eChitha izinambuzane Iimbovane yasekhaya yesitshabalalisi sempuku sempuku yesinambuzane